7 Siyaabood oo Teknolojiyaddu u Burburin Karto Sumcaddaada | Martech Zone
7 Siyaabood oo Teknolojiyad u Burburin Karto Sumaddaada
Jimcaha, Agoosto 23, 2019 Thursday, April 1, 2021 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan ku jiray goobta oo aan ku qabanayay aqoon isweydaarsi suuqgeyn dijitaal ah oo loogu talagalay nooc caalami ah. Aqoon-isweydaarsiga aniga ayaa fududeeyey oo aniga ayaa iskaashaday qayb ahaan Jaamacadda Butler iyo baraha cajiibka ah ee waqtiga buuxa ka shaqeeya ururka.
Markii aan nimid qaybta Martech Stack ee barxadda si aan wax ugu baro shaqaalaha ilaha tikniyoolajiyadda ee ururka dhexdiisa ah, waxaa i haleelay isku dhafka barnaamijyada. Uma muuqan sidii caadiga ahayd ee 'Martech Stack' ee afar-geesoodka midig-sare, meheradaha ganacsi. Waxay ahayd isku dhaf heer caalami ah, madal il furan, barnaamijyo yaryar, iyo xitaa la-hawlgalayaal hay'adeed.
Shirkaddu waxay u dhistay Martech Stack si ula kac ah si loo hubiyo inay u gudbin karto farriinta saxda ah rajada saxda ah ama macaamiisha waqtiga saxda ah. Dhammaan qeybaha ayaa jira oo meesha jooga… qaar si habsami leh isugu dhafan kuwa kalena u baahan geeddi-socod gacanta ah… laakiin mid kasta oo si taxaddar leh loo xushay si loo hubiyo arrimaha u hoggaansamida, welwelka amniga, iyo saameynta ugu badan ee guud ahaan baahida suuq-geynta.
Aqoon isweydaarsiga dhexdiisa, Martech Stack ayaa la soo bandhigay ee la soo dhaafay shaqaalaha. Iyo, istiraatiijiyad ahaan, macluumaad badan lama soo bandhigin oo ku saabsan waxa barnaamij kasta awooddiisu ahayd ama sida loo isticmaalay.
Sababtoo ah hoggaanka suuqgeynta shirkaddu wuxuu doonayay iibkiisa, xayeysiinta, suuqgeynta, iyo kooxaha khibradaha macaamiisha inay diiradda saaraan khibrada macmiilka, ka dibna si looga faa'iideysto teknolojiyadda lagu soo gudbinayo khibraddaas. Waxay ahayd lagama maarmaan in aan diirada la saarin waxa waayeen lagu sameeyo tiknoolajiyadda… laakiin in diiradda la saaro waxa la qabanayo haddii ay farsamada jirtay iyo in kale. Xitaa waxay qirayaan inay jiraan qaybo ka mid ah xargaha oo aan xitaa loo adeegsanin astaamaha sida caadiga ah loogu yaqaan.
Shirkadda ayaa adeegsatay erey gaabin ah, POST, ee habka suuqgeynta dijitaalka ah:
Dadka - Aqoonso bartilmaameedka dadaalka.
Ujeeddooyinka - Qeex ujeedooyinka ama natiijooyinka ay raadinayaan inay ku gaaraan dadaalka suuq geynta.
Strategy - Qeex wadiiqooyinka, dhex-dhexaadiyaasha, warbaahinta, iyo safarka si loogu hawlgaliyo bartilmaameedka si loo gaaro ujeeddooyinkaas.
Technology - Aqoonso tikniyoolajiyadda ka caawin karta cilmi baarista dadka, cabirto ujeeddooyinka, iyo dejinta istiraatiijiyadda.
Teknoolojiyaddu ma dhaawaceysaa Magacaaga
Teknolojiyaddu ma dhaawaceyso sumcadda macmiilka maxaa yeelay waxay mudnaanta siisay si habboon. Nidaamyada, dhibaatooyinka, miisaaniyadaha, ilaha, tababarka, amniga, iyo u hoggaansamida dhammaantood si taxaddar leh ayaa loo eegay ka hor teknolojiyada ayaa la doortaa. Farsamada lama arko as xalka, waxaa loo arkaa inay yihiin aaladaha lagama maarmaanka u ah in si hufan oo wax ku ool ah loo gaarsiiyo xalka.
Laakiin taasi maahan waxa aan ku arko shirkad kasta. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha aan u arko tikniyoolajiyadda oo si ba'an u saameyneysa caafimaadka noocyada qaarkood.
Apps - Macaamiisha ma rabaan inay la macaamilaan meherado. Hal tusaale waa warshadaha maaliyadeed. Macaamiisha ma rabaan inay la hadlaan la-taliye maaliyadeed, bangi, ama dillaal caymis… waxay rabaan oo keliya codsi weyn oo fudud oo la isticmaali karo oo leh dhammaan astaamaha ay u baahan yihiin. In kasta oo barnaamijyadu yihiin daruuri gebi ahaanba, haddana waxaa muhiim ah in la ogaado in tani ay jabisay xiriir kasta oo aadanaha la lahaa astaantaada. Shirkaddaadu waa inay la shaqeysaa laba jibbaar sidii ay ku dhisi lahayd xiriir ay la yeelato macaamiishan iyada oo loo marayo waxyaabaha ay dalbanayaan. Shirkadaha adeegsanaya barnaamijyada si ay ugu beddelaan cilaaqaadka waxtarka kharashka sidoo kale waxay uun kaga tagayaan sumaddooda halista marka tartamuhu bilaabo barnaamij ka fudud oo fudud. Barnaamijyadu waa daruuri, laakiin shirkadaha waa inay hubiyaan inay howlgelinayaan dadaallada kale ee ku xeeran si ay wax u bartaan, u caawiyaan, oo ay si wax ku ool ah ula xiriiraan adeegsadayaasha barnaamijkooda. Appku kuma filna!
Xaaladaha - Haddii aad isku dayeyso inaad ku beddesho nidaamka jawaab celinta otomaatiga ah isdhexgalka aadanaha, waxaad halis weyn gelinaysaa astaantaada. Maaddaama botsku cirka isku shareeray caan ahaanta, waxaan u hirgeliyay dhowr macmiil… oo si dhakhso leh ayaan uga laabtay ama si weyn wax uga beddelay isticmaalkooda. Dhibaatadu waxay ahayd adeegsadayaashu inay markii hore u maleeyeen inay la hadlayaan bani'aadam. Markii ay ku ogaadeen qalad ama talaabo qalad ah inay ahayd bot, ma aysan aheyn kaliya jahwareer, waxay ahaayeen kuwo si cad u xanaaqsan. Waxay dareemeen in la khiyaaneeyey. Hadda, markaan ka caawiyo macaamiisha gelinta bots, waxaan hubinaa in macaamiisha gabi ahaanba ogyihiin inay la hadlayaan adeege otomaatig ah… waxaanan bixinnaa waddo aan si dhakhso leh ugu gudbinno qof dhab ah.
Email - Macmiil kale oo aan ka shaqeynayay ayaa nashqadeeyay soona saaray nidaam adag oo ay ku iibsadeen liisaska isla markaana ugu dhiibeen kumanaan emayl aad u bartilmaameedsaday macaamiisha mustaqbalka. Waxay si caqli-gal ah u dhex martay nidaamyada sumcadda si loo hubiyo in farriimaha lagu gaarsiiyey sanduuqa aragtooda Markii ay ii sheegeen tobanaan kun oo farriimood oo ay toddobaad walba dirayeen, afkaygaan iska xidhi kari waayey. Waxaan weydiiyay sida dadaalkooda SPAM u shaqeynayay. Way yara xanaaqsanaayeen eedaynta madaama ay ku faanayeen dadaalka… laakiin waxay qireen inaysan wax natiijo ah ka soo bixin. Waxaan ku riixay inay isla markiiba xiraan waxaanan u dhaqaaqnay istiraatiijiyadda geeddi-socodka soo-galka ah ee aadka loo bartilmaameedsaday oo hadda soo saaraya tilmaamo tayo leh oo si guul leh loogu wareejinayo safarka macaamiisha. Ilaa maantadan la joogo, ma hayno waddo aan ku ogaan karno inta macaamiil ee mustaqbalka laga yaabo inay ku lumiyeen adoo adeegsanaya been-ka-sheegista iyaga. Fariin diristu waa mid raqiis ah, sidaa darteed magacyadu had iyo jeer waxay isku dayayaan inay soo diraan fariimo fara badan Cawaaqib xumada badanaa laguma oga dollar iyo senti, in kastoo. Waxaan joojiyay inaan ganacsi la sameeyo dhowr magac oo si fudud u been abuurtay aniga.
Sirdoonka Artificial - Qormada cusub ee qalinka ee 'Martech Stack' kasta waa awoodda lagu geeyo barashada mashiinka si iskiis loogu hagaajiyo dadaallada suuqgeynta. Waxaa loo iibiyay sida ugu fudud, laakiin way ka fogtahay mid fudud. Bixinta AI waxay u baahan tahay saynisyahano xog ah oo fahmaya sida loo falanqeeyo xogta, la dhiso loona tijaabiyo moodooyinka, loo kala saaro isbadalada iyo natiijooyinka, si wax ku ool ah loo geeyo shabakadaha oo dhan, loo dejiyo qaabab go'aan oo firfircoon, lana qiimeeyo faragelinta sababaha. Si liidata ayaa loo geeyay, AI waxay si aad ah u xaddidi kartaa awoodahaaga fariimaha… ama ka xun… samee ikhtiyaarro otomaatig ah oo ku saleysan moodellada cilladaha leh iyo geedaha go'aan qaadashada.
Privacy - Xogtu waa badan tahay. Shirkaduhu waxay iibsanayaan oo qabsanayaan inbadan oo kamid ah qayb ahaan, shaqsiyan, iyo ku riixida macaamiisha inay iibsadaan. Arrinta taagan ayaa ah in macaamiisha aysan arkin qiimaha xogtooda la qabtay, la iibiyay, lana wadaagay. Waxaa ku xadgudbay ciyaartoy xun… natiijada ka soo baxdaana waa sharci si weyn u carqaladeynaya awooda suuqleyda inay si hufan ula xiriiraan rajada iyo macaamiisha. Mas'uuliyadu waxay saaran tahay noocyada inay si taxaddar leh u isticmaalaan xogta, ula xiriiraan macaamiisha iyo rajooyinka sida loo adeegsanayo, halka laga soo helay, iyo sida loo tirtiri karo. Haddii aynaan ka shaqeyn sidii dadaalkeenna looga dhigi lahaa mid daahfuran, dowladdu waxay (waana horeba) baabi'inta awooda aan u leenahay inaan xogta si hufan ugu adeegsano Haddii aad u maleynaysid in xayeysiinta xun ay hadda faafineyso… kaliya sug illaa inta aysan shirkaduhu mar dambe marin u heli karin xogta.
Ammaanka - Xogtu waxay bixisaa arin kale… amniga. Waxaan aad ula yaabay tirada shirkadaha kaydiya xogta shaqsiga ah iyadoon la qarin oo si haboon loo xafidan. Ma hubo inay jiraan shirkado aad u tiro badan oo halkaa jooga oo khatartan si dhab ah u qaadanaya, waxaanan dareemayaa inaan arki doonno sumcado ku burburaya ganaaxyada iyo dacwadaha mustaqbalka dhow. Waxaan dhowaan aragnay Equifax oo xallinaya jebintooda $ 700 million. Maxaad samaynaysaa si aad u ilaaliso macmiilkaaga iyo xogta macmiilkaaga maanta? Haddii aadan maalgashi ku samaynaynin khubarada amniga dhinac saddexaad iyo xisaabtanka, waxaad halis gelinaysaa sumcaddaada sumcadda iyo faa'iidooyinka mustaqbalka. Hadana haddii aad ku keydinaysid furaha sirta ee xaashida macluumaadka oo aad kula wadaageyso emayl, waxaad la kulmi doontaa dhibaato. Meelaha maareynta ereyga sirta ah iyo xaqiijinta laba-geesoodka ah waa waajib.
dhoobo - Waan argagaxaa mararka qaarkood markaan maqlo boqolaal kun, ama mararka qaar malaayiin doolar, oo xirfadlayaal suuqgeynta shirkaduhu ay ku bixiyaan maalgashi isdaba joog ah oo 'Martech' ah. Badanaa waa la sameeyaa maxaa yeelay xalka si weyn loo aqbalay ayaa loo arkaa a ammaan maalgashi. Si kastaba ha noqotee, falanqeeye-saddexaad ee falanqeeye ayaa si taxaddar leh u qiimeeyay oo u xushay shirkadahaas… iyaga oo ku meeleynaya qeybta kore ee midigta-sare. Maxay shirkaddu u sameyn weyday maalgashi teknoolojiyad wax ka beddeli karta dadaalkooda suuq-geynta dijitaalka ah? Hagaag, waxaa jira tan sababo ah. Waxaa laga yaabaa inaadan haysan ilo aad ku haajirto oo aad ku xaliso xalka Waxaa laga yaabaa inaadan haysan howlo si aad si buuxda ugu kabato xalka. Waxaa laga yaabaa inaadan haysan miisaaniyad aad ku dhex gasho kuna xalliso xalka Isbarbardhiga aan adeegsaday waa kan…
Iibsashada shirkad heer caalami ah Martech Stack waxay la mid tahay iibsashada daar weyn. Waad iibsanaysaa qasriga, laakiin waxa la geeyay waa xamuul xamuul ah oo alwaax ah, tuubooyin, shubka, rinjiga, albaabada, daaqadaha, iyo wax kasta oo kale oo aad u baahan tahay. Farsamo ahaan waad ku heshay guriga weyn… hada waa shaqadaada inaad ogaato sida loo dhiso.
Xididdeena suuqleyda dijitaalka ah, waxaan isku dayeynaa inaan kor u qaadno sumcadda sumadeena, kororno awoodeena ku dhex jirta warshadeenna, iyo inaan dhisno kalsooni u dhexeysa sumadeena iyo rajadayada iyo macaamiisheena. Suuqgeyntu waxay ku saabsan tahay cilaaqaadka. Laga bilaabo maanta, tikniyoolajiyaddu ma beddeli karto cilaaqaadka aadanaha ee ka dhexeeya calaamadeena iyo macaamiisheenna. Taasi way isbadali kartaa mustaqbalka… laakiin ma aaminsani inaan taas arki doono intaan noolahay.
Tani ma aha qoraal ku saabsan tiknoolajiyada xun… waa qoraal ku saabsan sida suuq-xumada, ku xadgudubka, ama rajooyinka buunbuuninta ee tikniyoolajiyadu u dhaawici karaan sumaddooda. Waxaan nahay dhibaatada, ma tiknoolajiyadda. Teknoolojiyaddu waa xabagta iyo buundada aan u baahannahay inaan kor ugu qaadno dadaalkeenna - waa daruuriyad buuxda oo loo qabo suuq kasta oo casri ah. Laakiin waa inaan ka taxaddarnaa adeegsiga tikniyoolajiyadda si aan u hubinno inaynaan burburin wax kasta oo aan aad ugu dadaalnay dhisidda.
Fadlan miyaan dili karnaa khuraafaad taxaddar leh?